Vokatra vaovao : namoaka ny « Miandry aho » i Aafly | NewsMada
Vokatra vaovao : namoaka ny « Miandry aho » i Aafly
Nivoaka tamin’ny faran’ny volana oktobra lasa teo ny rakikira voalohan’i Aafly, mitondra ny lohateny hoe: «Miandry aho». Misy hira folo, noforon’i Aafly sy i Mamy ary i Rhit, ao anatin’io. Mibahan-toerana amin’ity vokatra voalohany ity ny gadona pop rock sy ny R&B, raha ny fanazavan’i Aafly. Ankoatra ny « Miandry Anao», anisan’ny vazo tafiditra ao anatin’io rakipeo voalohany io ihany koa ny « Haizina sy hazavana», « Ndao handeha».
Na vaovao amin’ny sofin’ny maro aza ny anarana hoe Aafly, tsy vitsy amin’ ireo hirany kosa no efa mandeha eny anivon’ny onjam-peo eto an-dRenivohitra. Taorian’ny nivoahan’ity rakikira ity, tetikasa manaraka vinavinan’ny tarika ny fanomanana rindran-tsary vaovao, ho fanomezana fahafaham-po hatrany ny mpankafy.
Tsara ny manamarika fa efa ela nilomanosana tao anatin’ny mozika i Aafly, saingy tamin’ny faraparan’ny taona 2016 vao sahy niditra lalindalina kokoa. « Tena noezahina natao tamin’ny kalitao tsara sy nampiasana ny teknolojia avo lenta, io vokatra voalohany io ka inoana fa hahafa-po ny mpihaino sy ny mpankafy mozika », hoy i Aafly.